Muraayada, Farshaxanka iyo Farshaxanka ee Warshada-SHUNDA - Wararka Shirkadda
43 siyaabood oo jaban oo qurxin gudaha ah ayaa ka dhigi kara gurigaaga mid qaali ah
Waxaan kugula talineynaa kaliya alaabta aan jecelnahay waxaanan u maleyneynaa inaad sidoo kale jeclaan doonto. Waxaa laga yaabaa in aan ka helno xoogaa iib ah alaabta lagu soo iibsaday maqaalkan oo ay qoreen kooxdayada ganacsi. Ma rabtaa inaad ogaato sir? Gebi ahaanba waa suurtogal in gurigaaga laga dhigo mid aad uga qaalisan kan dhabta ah; dhamaantiin...
Qiimaha Warshada Shiinaha Labanlaab Casri ah oo Daabacaadda Rinjiga ah ee gidaarka musqusha muraayada leh
Astronaut Spaceman Dayaxa Habeenka Iftiinka Qolka Sariirta Desktop-ka Miiska Qurxinta Hal-abuurka leh iyo Darbiga Lambaska Hibada ee Carruurta Carruurta Ilmaha
Ku soo dhawoow nooc kasta oo laambad/Iftiin ah oo la habeeyey * Laydhkan Astaamo cajiib ah: Naqshad qabow oo cirbixiyeen ah oo leh tafaasiil jilicsan, oo ku habboon qurxinta qolka jiifka. Waxay noloshaada u keeni doontaa xoogaa firfircooni ah. Ma aha oo kaliya nalka habeenkii, laakiin sidoo kale qurxinta gudaha ee wanaagsan ee gurigaaga. Waxaad ku dhejin kartaa wax kasta...
muraayadda dhabta ah, laambadihii iyo shelf ee qurxinta guriga
Waxaan inta badan soo saara muraayadda dhalada dhabta ah, laambadaha iyo shelf ee qurxinta guriga, iyo soo dhawaynta habaysan. Macaamiishayadu waxay ka yimaadeen waddan kasta, waxay aad ugu faraxsan yihiin adeegeena, hadalka jawaabta iyo tayada alaabta. Marka laga reebo alaabtan, waxaan sidoo kale samayn karnaa kuwa kale, haddii aad leedahay sawir, cabbir iyo qalab iwm.
Shunda alaabta qurxinta guriga
MOQ waa 1 gabal warshad Shunda ee qurxinta guriga waxaa la aasaasay 2012. Waxaan leenahay khibrad 10 sano ka badan oo ku saabsan wax soo saarka, naqshadeynta, iibinta iyo adeegga iibka kadib macaamiisha caalamiga ah. Shirkadeena waxay diiradda saartaa soo saarista iyo naqshadaynta dhammaan noocyada muraayadaha (muraayada galaaska, muraayadda acyrlic), farsamada alwaax (...
Hordhaca shirkadda Shunda
MOQ waa 1 xabbo oo ah warshadda qurxinta guriga ee Shunda waa alaab-qeybiye siisa wax soo saarka, nashqadaynta, iibka iyo adeegga iibka kadib macaamiisha caalamka. Shirkaddayadu waxay diiradda saartaa soo saarista iyo naqshadaynta dhammaan noocyada muraayadaha (muraayada galaaska, muraayadda acyrlic), Farshaxanka iyo farshaxanka (sanduuqa alwaax iyo shelf) iyo nalalka (miiska ...